दुर्गाप्रसाद ४१ वर्ष जेल बस्नुको भित्रि रहस्य यस्तो, यसरी पुगेका रहेछन जेल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 25, 2021 AdminLeaveaComment on दुर्गाप्रसाद ४१ वर्ष जेल बस्नुको भित्रि रहस्य यस्तो, यसरी पुगेका रहेछन जेल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापा । ४१ वर्षपछि भारतीय जेलबाट छुटेका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना -दिपक जैसी आइतबार बिहानै स्वदेश आइपुगेका छन् ।कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र विश्व सेवा विस्तार संस्थाको पहलमा उनलाई नेपाल पठाइएको हो ।
झापामा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुर्गालाई परिवारको जिम्मा लगाईने विश्व सेवा विस्तारका प्रतिनिधि इन्द्र बस्नतले जनाए । पत्रकार सम्मेलनपछि उनलाई इलाम माई नगरपालिका १० स्थित घर पुर्‍याइने छ ।
भारत पश्चिम बंगालको दमदम करेक्सनल सेन्टर मा रहेका उनी कोलकाता उच्च अदालतको आदेश बमोजिम शनिबार छुटेका हुन् । शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर उनलाई लिन भाइ प्रकाशचन्द्र दमदम जेल पुगेका थिए । अदालत र प्रकाशचन्द्रबीचको सम्झौतासहितको पत्र शुक्रबार अपरान्ह अदालतले जेल पठाएको थियो ।
थप भिडियोको लागि यहाँँ क्लिक गर्नुहोला:
आज सुनको मूल्य बढ्यो ! हेर्नुहोस् तोलाको कति पुग्यो……